Astropad, ovay ny takelaka nomerika ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Astropad manova ny iPad ho takelaka nomerika ho an'ny Mac
Jesus Arjona Montalvo | | Accessories, iPad, Mac OS X
astropad, dia fampiharana novolavolain'ny injeniera Apple taloha ho an'ny iOS sy Mac, izay mamela antsika avadiho ho takelaka nomerika ny iPad, toy ny "Cintiq avy amin'i Wacom". Rehefa nametraka ilay rindranasa izahay, izay apetakay amin'ny faran'ny lahatsoratra, amin'ny fitaovana roa, azo atao ny miasa miaraka amin'ireo fitaovana matihanina toy ny Illustrator na Photoshop, manararaotra tombony lehibe amin'ny fampiasana ny fahatsapana ny efijery mikasika iPad.
Izay hitanao amin'ny iPad anao dia mitovy amin'ny Mac anao. Astropad dia manana teknolojia tsy misy tariby. Tena miasa ary a safidy tsara ho an'ny mpamorona sary, inona ianao mamela anao hiasa amin'ny latabatrao na eo amin'ny farafara.
Manome traikefa an-tsary voajanahary.
Miasa amin'ny Mac.
Manolotra kalitaon'ny sary tsy mbola nisy toa azy izy io.
Mirehitra haingana, tohizo ny sarinao.
Mipoaka amin'ny 60 FPS, na dia Wi-Fi aza.
Izy io dia miasa tsy misy tariby na amin'ny alàlan'ny USB.
Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fanjaitra iOS.
Hitsin-dàlana azo aleha.
Miasa, Astropad dia mampiasa ny fifandraisana WiFi na USB amin'ireo fitaovana, tsara ny asany. Ankoatra izany, ny fotoana famaliana dia eo noho eo, zavatra azo atao misaotra ny teknolojia Liquid, teknolojia novolavolan'ny injeniera roa, izay mamela ny fahazoana a kalitaon'ny sary tsara sy mamaly haingana. Tsy isalasalana fa fampiharana tena ilaina io ho an'izay te hampiasa ny iPad hikirakira ny Mac. Astropad dia manohana ny stilosy mora tohina, izay manome anao ny fahalalahana miasa miaraka amina karazana fitaovan'ny stylus.
Ny Astropad dia sarany $ 49.99, eo amin'ny € 47.7, na dia misy aza ny fahafaha misintona a pitsarana avy amin'ny tranonkalany. Mila ny iOS 8 sy OS X 10.9 (Mavericks) na hiasa aoriana.
Avy amin'ity rohy ity dia azonao atao ny misintona ny rindranasa ho an'ny Mac, eto.
Fenitra Astropad€ 29,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Astropad manova ny iPad ho takelaka nomerika ho an'ny Mac
Sintomy ny sary mombamomba ny keynote Apple farany